China Ejiri Bọmbụ Nke ọka China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ejiri Bọmbụ Nke ọka - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ejiri Bọmbụ Nke ọka)
Ìhè Ìhè nke Led Ling 400W
Ìhè Ìhè nke A 400w nwere ọnụ ọgụgụ 52,000lumens. Ìhè Igwe ọkụ 400w Metara Halw dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ebe egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu Ìhè Nnukwu Ìhè nke 400w bụ IP65 ma chebe ya ka mmụba mmiri. Nkuku bekee nke butere...
Ìhè Ìhè nke Ọwụwa Anyanwụ Ruo 70W 75W 80W
Ìhè Ihu Igwe Ọdụdọ anyị 70w nwere ike ịmịpụta ọganiihu dị 80000m. Ìhè Igwe ọkụ a nke Ledan 75w bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ kwekọrọ na ya. Nke a na-enwu n'ichekwa Ìhè 80w nwere eriri igwe na-agbanwe agbanwe, nke kwụsiri ike ma nwee ntụkwasị obi, can nwere ike iwunye ngwa ngwa ịchọrọ. Site na...
Ejiri Bọmbụ Nke ọka Ejiri bọmbụ nke ọka Ejiri ọkụ ọkụ Ejiri ọkụ dị elu Ejiri Mkpụrụ Ọkụ Ejiri Ọkụ Kasị Ọkụ Ejiri ọkụ ọkụ na-ekpuchi 150w Ejiri Ọkụ